အပြည့်အဝဖျေါပွခကျြ၏ကွန်ပျူတာ Optical Drive ကိုစက်ထူးဆန်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပပါဝင်သည် | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဇွန်လ 17, 2019 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး ကွန်ပျူတာ, အီလက်ထရောနစ်, OS ကို-STORE, OSGEAR ပံ့ပိုးမှု, ထုတ်ကုန်များ, သိုလှောင်ခြင်း, နည်းပညာ 0
အရေးအပါဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ optical drive ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ (CD ကို, ဒီဗီဒီ, Blu-ray player) drive ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် drive ကိုနှင့်အတူအသုံးပြုရလိမ့်မည်ဟု discs တွေကိုအမျိုးအစားများအဖြစ် function ကိုဖြစ်ပါတယ်.
စံ Format ကို>>>
-ROM: Read-Only Memory. သင်တစ်ဦး -ROM disc ကိုစာရေးမနိုင်, ကပေါ်ပြီးသားဒေတာနှင့်အတူစက်ရုံ left ရာ. တစ်ဦးက -ROM drive ကိုသူတို့ကိုစာရေး discs တွေကိုဖတ်ပါပေမယ့်မနိုင်, နှင့်အလွတ် disc ကိုအားလုံးကိုမှာအဘယ်သူမျှမအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်.
-R ကို: စံချိန်. သငျသညျတခါ, ဤ discs တွေကိုတရေးလိုက်နိုင်ပါတယ် (သင်တစ်ဦး -r drive ကိုရှိပေးအပ်). သို့သော်သင်သည်ပြုမိတဲ့အခါ, ကထိရောက်စွာတစ် -ROM disc ကိုဖွင့်.
-RW: ပြန်လည်ရေးသား. နောက်ထပ်မိုက်မဲအတိုကောက်, ကြောင်းအမြဲအကြံပြု “အရေးအဖတ်” ငါ့ထံသို့. သင်တို့သည်ဤ discs တွေကိုရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်, သူတို့ကိုဖျက်ပစ်, နောက်တဖန်သူတို့ကိုစာရေး.
-ပြန်လည်: စံချိန် Eraser. -RW ၏ Blu-ray အပြောင်းအလဲ, ဝေးသောပိုပြီးပညာရှိအတိုကောက်နှင့်အတူ.
မီးလောင်: တစ်ဦး disc ကိုစာရေး. ကလေဆာနှင့်အတူပြုသောအမှုဖွင့်လို့ပဲကိုမီးရှို့ကိုခေါ်မယ့်, မဘောပင်.
ဒီဗီဒီ + R ကို; +RW; ± R ကို, ± RW: စံချိန်နဲ့ rewritable ဒီဗီဒီနှစ်ခုစံချိန်စံညွှန်းများရှိပါသည်: DVD-R ကိုနှင့် DVD ကို + R ကို, ယင်း၏ညီမျှ RW အပြောင်းအလဲနှင့်အတူအသီးအသီး, စီ drive ကိုနှင့်အလွတ် disc ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအစားလိုအပ်. အဆိုပါ±နိမိတ်လက္ခဏာ, အရာသင်သာ drives တွေကိုအပေါ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, drive ကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုမီးမရှို့နိုင်သောသင့်ကိုပြောပြမှာ – နှင့် +. လုံးဝနီးပါးအားလုံးဒီရက်±များမှာမောင်း, + R -r ဆီလျှော်အကြားခြားနားချက်အောင်.
DL: dual အလွှာ. ဤသည်နှစ်ဆသို့မဟုတ်နီးပါး DVDs နဲ့ BDs များ၏စွမ်းရည်နှစ်ဆ. မဆို DVD ဒါမှမဟုတ် Blu-ray player drive ကို DL discs တွေကိုဖတ်နိုင်.
Drive ကိုအမျိုးအစားနှင့် Functions များ >>>
CD-ROM drive တခု
CD-ROM ကို drives တွေကိုဖတ်ပါသာ, CD-DA (အသံ) discs တွေကို, CD-ROM ကို (ဒေတာ) discs တွေကို, နှင့် (များသောအားဖြင့်) CD-R / CD-RW writable discs တွေကို.
CD-ROM drive တခုများ၏အားနည်းချက်များကြောင့် DVD-Video မဖတ်နိုင်သောများမှာ, DVD-အသံ, သို့မဟုတ် DVD-ROM ကို CD ပြားနှင့်မနိုင်ကြောင်း discs တွေကိုရေးဖို့.
DVD-ROM drive တခု
CD-ROM ကို drives တွေကိုလိုပဲ, DVD-ROM ကို drives တွေကို CD-DA ဖတ်ပါ, CD-ROM ကို, နှင့် CD-R / RW discs တွေကို, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်း DVD-ဗီဒီယိုကိုဖတ်ရှု, DVD-ROM ကို, နှင့် (တခါတလေ) DVD-ပေး Audio CD ပြား.
DVD-ROM ကို drives တွေကိုဖတ်ပါသာဖြစ်ကြောင်း devices များ, နှင့် discs တွေကိုရေးဖို့မနိုင်.
CD-RW drive ကို
CD-RW drives တွေကို, လည်းခေါ် CD ကိုစာရေးဆရာများ, CD Burner, သို့မဟုတ် CD ကိုအသံဖမျး. CD ကိုစာရေးဆရာများ, CD-ROM ကို drives တွေကို CD-DA ကဲ့သို့တူညီသောပုံစံများကိုဖတ်ရှု, CD-ROM ကို, နှင့် CD-R / RW discs တွေကိုဒါပေမယ့်လည်းစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ CD-R ကိုမှဒေတာများကိုရေးနိုင်ပါတယ် (ရေးလိုက်-တစ်ချိန်က) နှင့် CD-RW (rewritable) discs တွေကို.
DVD ကို Combo Drive ကို
ဤသည် drive ကို CD-RW နဲ့ DVD-RAM ကိုဖတ်နိုင်, သို့သော်သာ CD-RW ရှို့မဟုတ် DVD-RW နိုင်ပါတယ်
Blu-ray Combo Drive ကို (bd-ROM ကို)
Blu-ray Player ကြောင်း Blu-ray player ကစား, ဒီဗီဒီ, နှင့် CD ကို. ဒါဟာ 3D ထောက်ခံပါသည်(3D အဆင်သင့် software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါ,). drive ကိုရေးဖို့မပါဘူး / Blu-ray player ကိုမီးရှို့ပေမယ့် DVD ကိုနှင့် CD ကို Blu-ray player ကစားဖတ်နှင့်ရေးထားမည် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ.
Blu-ray player Burner Drive ကို
Drive ကို BDXL format ကိုထောကျပံ့. BDXL 128GB ကို Quad အလွှာများနှင့် 100GB Triple Layer Blu-ray player မီဒီယာထောက်ခံပါတယ်. ဒါဟာ bd-ROM ကို discs တွေကိုဖတ်နိုင်, ကိုဖတ်ရှု / တစ်ခုတည်းထံစာရေး, dual-, သုံးဆ, နှင့် Quad-layer ကို bd-R Disc ပေါင်း. ပြင်ပစာရေးဆရာကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဒီဗီဒီနှင့် CD ကိုကို formats ရေးသဟဇာတနောက်ပြန်ဖြစ်ပါသည်.
ငါ SATA သို့မဟုတ် IDE Device ကိုဘယ်လိုရှေးခယျြဘူး>>>
အဆိုပါ optical Disk ကို Drive ကို တစ်ဦး interface ကို cable ကိုမှတဆင့် Motherboard နဲ့ချိတ်ဆက်.
SATA Serial အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှောင်ကြိုးအတိုကောက် (သို့မဟုတ် Serial ATA) နှင့် IDE ကိုလည်းစင်ပြိုင် ATA သို့မဟုတ် PATA ဟုခေါ်သည်. SATA အသစ်များကိုစံနှင့် SATA drives တွေကို PATA ထက်ပိုမြန်ဖြစ်ပါတယ် (ဒီမှာ) drives တွေကို. SCSI (အသေးစားကွန်ပျူတာ System ကို Interface) အရာအဓိကအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည်.
ကအဟောင်းတွေ IDE connectors ဒါမှမဟုတ်အသစ်များ SATA connector မြားပါဝငျသညျဆိုပါကသင့်ကွန်ပျူတာဖွင့် Motherboard ကမှာကြည့်ရှုသို့မဟုတ်သင့် Motherboard ကကို manual ထဲမှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်. အဆိုပါ Motherboard ကပင် connector ကိုနှစ်ယောက်စလုံးအမျိုးအစားများပါဝင်နိုင်ပါသည်.
Desktop နဲ့ Notebook ကွန်ပျူတာယန္တရားများ loading နှစ်ခု optical disk ကို drives တွေကိုရှိပါတယ်.
Desktop ကွန်ပျူတာများအတွက် optical drives တွေကိုအဘို့အ Tray ထဲက-တင်ယန္တရားများမဟုတ်ဘဲအခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဖြစ်လေ့.
ဗန်း Load drive ကို – တစ်ဗန်း-တင်ယန္တရားအတွက်, disc ကိုတစ်ဦးမော်တော်ဗန်းပေါ်ကိုထား, ကွန်ပျူတာနှင့်ထွက်လှုံ့ဆော်ပေးရာ.
slot Load drive ကို – တစ်ဦးအတွက် အထိုင်-တင်ယန္တရား, disc ကိုတစ်ဦး slot ကသို့ကျဆင်းလျက်ရှိသည်နှင့် drive ကိုအတွင်းရှိမော်တော် roller နှင့်ထဲက disc ကိုရွှေ့ဖို့အသုံးပြုကြသည်.
optical Drive ကိုစံမြင့်>>>
တစ်ဦးက desktop ကွန်ပျူတာများတွင်, အဆိုပါ Optical Drive ကိုစံ 5.25 လက်မပုံစံကိုအချက်ထဲမှာလာ.
Laptop ကိုပါးလွှာစံရှိ ပြည်တွင်းရေး drive ကို device ကို အရွယ်: 12.7မီလီမီတာနှင့်အ 9.5mm
ဤတွင်ဘုံ optical drive ကိုမှအဓိကနိဒါနျးများမှာ.
နောက်ထပ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကျေးဇူးပြုပြီး click here.
optical drive ကို
processor ​​ကို မိုဘိုင်းဖုန်း Software များ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet HTC က ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Samsung က ဥပဒေရေးရာအနက် Nokia က Intel က 64-နည်းနည်းက Windows စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု HD Graphics device ကိုမော်ဒယ် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီပီယူ နည်းပညာ
ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Intel က Technology_Internet processor ​​ကို OS ကို-STORE Qualcomm မှ စမတ်ဖုန်းများ HTC က နည်းပညာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ဥပဒေရေးရာအနက် Samsung ရဲ့ Galaxy device ကိုမော်ဒယ် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စီပီယူ Nokia က Sony Ericsson က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် HD Graphics ပရိုဆက်ဆာ မိုဘိုင်းဖုန်း Samsung က Software များ 64-နည်းနည်းက Windows Intel က Server ကို